Murashax Madaxweyne ayaan ahay…..! – Dr. Abdinur for President
Ololihii 1974-1975 waxaa ardadii iskuulkayaga la geeyey Degmada Waajid iyo Tiyeeglow Gobolka Xuddur. Muddo ayaan kala irdhownay, kaddibna anigu waxaan soo galay dalka Sweden 1981 kaddibna waxaan u soo wareegay magaalada Toronto, Canada sannadkii 1997. Cabdinuur oo qaddar iga dambeeyey isaguna wuxuu soo galay dalka USA 1982. Dib ayaan isu hellay sannadkii 1998 ilaa intii ka dambaysay, in badan ayaan wada shaqaynnay. . Haddaba Xildhibaanka wax dooranayoo inta aadan codkaaga iska bixin, horta bal wax hubso! (Hubsiimo Hal baa la siistaa). Raad arooyo dib u raac. Isweyddii Muxuu Murashuxu gudaa, muxuuse galaa!. Waxaan kuu caddaynaa inuu Dr. Cabdinuur uu ka mid yahay horseedka iyo haldoorka dadka Soomaaliyeed ee Qurbaha ku raagay. Wuxuu kaga duwan yahay in badan oo qurbo-joog ah oo aad loo saluugay markii ay xilal kala duwan dalka ka qabteen muddooyinka dambe, arrimahan hoos ku xusan.
Xagga tacliinta wuxuu hormuud u noqday kooxdayadii kuwa ugu horreeya ee PHD ka qaatay dalka Maraykanka.
Wuxuu ka mid noqday shaqaalaha sare ee wasaaradda waxbarashada ee Magaalada Columubus, Gobolka Ohio, USA , Halkaas oo uu muddo 20 sano ku dhawaad ka shaqaynayey.
Waa nin raadkiisa dib loo raaci karo oo dalka USA siiyey canshuur gaaraysaa kumaankun oo doollar muddadii dheerayd ee uu wasaaradda waxbarashada u shaqaynayey.
Waa nin aan ogaantay dembi gelin oo aan ciqaab mudan muddadii dheerayd, qiyaastii 40 sano ku dhawaad uu dalka USA ka shaqaynayey, kuna noolaa.
Ugu Dambayn wan nin la tijaabiyey oo muddo dalkeenna Wasiirka Waxbarashada ka soo noqoday xilligii uu Farmaajo Ra’iisul Wasaaraha ahaa.
Intaas aan soo taxay waa markhaati ma doonto aad helo karto xogteeda.
Aadanaha oo dhan ayaa iin iyo dhalliil leh, wuxuu ka mid yahay dadka ugu ceebta yar.
Waa nin ku astaysan aadab sare iyo anshax wanaag.
Gebagebada iyo Gunaanadka hadalkaygu waxaa weeye, Dr. Cabdinuur waa nin u qalma inuu dalka ka noqdo Madaxweyne ama Ra’iisul Wasaare.
Xalaal iftiin baa la qashaa, Xilliga hadda la joogana (Miro berde duuduub ha u liqin ee iska hubsada). Doorta nin dalka iyo dadka wax u qaban kara. Dr. Cabdinuur dawgaas Allaylehe ogaalkay waa ku bannaan yahay.
Waxaan kuu caddaynayaa xildhibaanow, codka aad siiso Dr. Cabdinuur inuusan ahayn cod kaa khasaaray balse waa hiilo qarankeennu maanta baahi weyn u qabo inuu helo dad aqoon leh oo geediga iyo hayaanka beesheenna ku fura meel cosob iyo Barwaaqo leh, dadkaas kuwa ugu mudan ayuu ka mid yahay.
Tubta iyo talada toosan Eebbe ha inna wada solansiiyo.
Qoraaga (Maxamad Sh. Xasan, Toronto, October 18th, 2020.)